Mamnuucida indho shareerka oo ka dhaqan galaya maanta dalka Denmark… – Hagaag.com
Mamnuucida indho shareerka oo ka dhaqan galaya maanta dalka Denmark…
Posted on 1 Agoosto 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Dalka Danish-ka ayaa maanta ka dhaqan geliyaa mamnuucida niqaabka oo ku beegan 1da August, laakin Sabina ayaan guriga uga soo tegi doonin indha shareerkeeda, waxayna ka hor iman doontaa sharcigaasi, dibada ayey u baxi doontaa iyada oo jebineysa xeerkaasi.
Bishii May ayaa baarlamaanka Danish-ka mamnuucay niqaabka lagu wato goobaha dadweynaha, Denmark ayaa ku biireysa France iyo qaar ka mid ah dalalka kale ee Yurub, si loo taageero qiyamka calmaaniga iyo dimoqraadiyada sida ay siyaasiyiinta qaar ay tilmaameen.
Laakiin Sabina (21 sanno jir) oo jecel in ay noqoto macallimad, ayaa ku biirtay gabdho kale oo Muslimiin ah oo xirta indha shareerka oo la baxay “haweenka wadahadalka”, si ay uga mudaaharaadaan oo kor loogu qaado wacyiga dadweynaha ee ku saabsan sababta baahida loo qabo in ay u ogolaadaan haweenka ku muujiyaan aqoonsigooda jidkaasi.
“Anigu kama tagi doono indho shareerkeyga, haddii aan u baahdo in aan iska dhigo, waa in ay ahaataa mid aniga iga timid” Sabina ayaa sidaasi tiri.
Sida dumarka kale ee la midka ah Sabina oo ka hadlay arrintan, Sabina ayaan dooneyn in ay kashifto magaceeda runta ah iyadoo ka baqeysa in dhibaato loo geysto qoyskeeda.
Haweenka indho shareerta ayaa qorsheynaya in ay abaabulaan dibadbaxyo maanta, waxaana ku soo biiri doona haweenka Muslimiinta oo aan xiran niqaabka iyo haween aan xataa Muslim aheyn ayaa damacsan badankooda in ay xirtaan niqaab inta uu socdo dibadbaxa.
Sida ku cad sharciga, booliska ayaa xaq u leh in haweenka ku amraan in ay siibaan indha shareerka ama ka tagaan goobaha dadweynaha. Wasiirka cadaalada Denmark Schorn Pipp Paulsen ayaa sheegay in bilayska ay ganaaxi doonaan oo lagu amri doono inay ku noqdaan guryahooda.
Ganaaxa ayaa wuxuu u dhexeeyaa 1000 DKK ($ 160) marka ugu horeysa iyo 10,000 DKK marka afaraad ee qofku gefka galo.